Alvaro Morata oo cabasho ka muujiyay hab dhaqanka taageerayaasha Chelsea – Gool FM
Alvaro Morata oo cabasho ka muujiyay hab dhaqanka taageerayaasha Chelsea
Liibaan Fantastic August 11, 2017
(London) 11 Agoosto 2017 Weerar yahanka ku cusub horyaalka ingiriiska ee Alvaro Morata ayaa durbadiiba qaylo dhaan bixiyay isaga oo kooxda u ciyaaray kaliya 15-daqiiqo oo rasmi ah.
Alvaro Morata ayaa sheegay in taageerayaasha Chelsea ayba doonayeen inay dilaan isaga halka kuwo kale ay ku qaylinayeen inuusan u qalmin lacagtii ay ku soo iibsatay Blues kadib gool ku laadkii uu khasaariyay kulankii Arsenal.
Morata ayaa ka soo dhaqaaqay xaggaagan kooxda Real Madrid, wuxuuna 80 milyan oo euro ugu soo biiray kooxda Chelsea.
“Wali waxaan u baahanahay waqti aan ku fahmo dhaqanka horyaalka ingiriiska, waxaan isku dayayaa la qabsiga hab ciyaareedka tababare Conte” ayuu u sheegay Marca.
“Waxaan ciyaaray oo kaliya laba kulan oo saaxiibtinimo iyo 15-daqiiqo oo ah koobka Community Shield, markii aan khasaariyay gool ku laadka waxayba u muuqatay in dhamaantood ay idileen halka kuwo kale ay ku celcelinayeen in aanan u qalmin lacagtii ay igu soo iibsatay Chelsea”.
DEG DEG: Philippe Coutinho oo u gudbiyay Liverpool codsi ah in la fasaxo
Barcelona oo ogolaatay in Neymar uu u ciyaaro PSG